Sida Loo Xulo Adeeg Bixiyaha Emailka
Khamiista, Sebtember 10, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan waxaan la kulmay shirkad ka fekeraysa inay ka tagto adeeg bixiyaha emaylka oo ay gudaha ka dhisto nidaamka emaylkooda. Haddaad toban sano ka hor i weydiin lahayd inay taasi fikrad fiican tahay, anigu ma dhihi lahayn. Si kastaba ha noqotee, waqtiyadu way isbeddeleen, iyo tiknoolajiyada 'ESPs' way fududahay in la hirgeliyo haddii aad ogtahay waxa aad sameyneyso. Waa sababta aan u horumarinay CircuPress. Maxaa Ku Bedelay Bixiyeyaasha Adeegga Emailka? Isbedelka ugu weyn ee leh
Wednesday, September 2, 2015 Douglas Karr
Boqolkiiba 70 macaamiisha ayaa doorbidaya inay ka helaan macluumaadka shirkad waxyaabaha ay ka kooban tahay halkii ay ka heli lahaayeen xayeysiinta. Boqolkiiba 77 ganacsiyada yar-yar ayaa maal-galiya hababka suuq-geynta waxyaabaha ku jira si loogu beddelo martida khadka tooska ah macaamiisha. Qeybta ugu hooseysa waa tan: Guji ka kooban Mawduucyada La Wadaagaa waxay shan jeer ka badan yihiin natiijada iibsiga! Ka baxsan kharashka waqtiga, suuq-geynta waxyaabaha ma ahan qaab qaali ah oo lagu kobciyo ganacsigaaga. Tirada badan ee
Khamiis, Juun 16, 2015 Isniin, Janaayo 16, 2017 Adam Yar
Waa maxay SMS? Waa maxay MMS? Waa maxay Xeerarka Gaaban? Waa maxay erayga loo adeegsado SMS-ka? Markii Suuqgeyntu ay noqoto mid guud, waxaan u maleynayay inay fikrad fiican tahay in la qeexo qaar ka mid ah ereyada aasaasiga ah ee loo adeegsado warshadaha suuqgeynta moobiilka. SMS (Adeegga Farriinta Gaaban) - Waa halbeeg loogu talagalay nidaamyada fariinta taleefanka ee u oggolaanaya dirista farriimaha u dhexeeya aaladaha moobaylka oo ka kooban farriimo gaagaaban, oo sida caadiga ah qoraal keliya ku jira. (Farriin Qoraal ah) MMS (Fariin Multimedia ah
10 Dariiqo oo loogu Kordhiyo Falanqeynta Bogagga Istaraatiijiyadda Mawduucaaga
Jimco, Janaayo 2, 2015 Douglas Karr
Talada wanaagsan waa mid waqti dhaaf ah sida ay tahay macluumaadka ku jira sawir-gacmeedkan. Diana Adams oo ka tirsan BitRebels ayaa liis garaysay 10 Ways oo loogu talagay in lagu kiciyo Bogaga Qoraalahaaga iyo NowSourcing waxay u rogtay muuqaal qurux badan. Taladu waa mid toos ah: Si joogto ah ugu dhaji waxyaabaha wanaagsan (haa, waan ogahay inaan ka maqnayn fasaxa). Ka dhig qoraaladaada kuwa la wadaagi karo - waxaan jecel nahay fudud wadaag wadaag bulsheed ee WordPress! U Isticmaal Qalabka Abuurista Mawduuca - waxaan leenahay dejin digniin ah
Faa'iidooyinka Suuqgeynta Shirkada
Jimco, Janaayo 31, 2014 Jimco, Janaayo 31, 2014 Douglas Karr
Forrester wuxuu saadaaliyay in qarashka kuxiran ee suuq geynta ay kori doonaan ilaa $ 4 bilyan sanadka 2014, kuna kordhayaan heerka kobaca sanadlaha ah ee 16%. Mid ka mid ah go'aannadii aan goor hore ku gaarnay CircuPress wuxuu ahaa inaan ka dhigno isticmaale kasta mid ku xiran. Habkaas, sida emayllada loo soo diray, haddii akhriste uu isdiiwaangeliyo ka dib markii uu gujinayo awoodda ku xiran xiriiriyaha, qofka emailka diraya waa la abaalmariyey. Tani waa istiraatiijiyad cirka isku shareertay iyadoo la adeegsanayo sida DropBox… halkee